११ औं सन्तानको रुपमा छोरी पाएपछि परिवारले पूर्णता – Kumbha Khabar
११ औं सन्तानको रुपमा छोरी पाएपछि परिवारले पूर्णता
लगातार छोरामात्र पाइरहेका एक जोडीले ११ औं सन्तानको रुपमा छोरी पाएपछि आफ्नो परिवारले पूर्णता पाएको बताएका छन्।
२२ वर्षको उमेरमा पहिलोचोटि आमा बनेकी स्कटल्यान्डकी एलेक्सिस ब्रेटले १५ वर्षको उमेरमा १० सन्तान जन्माइन्। ती सबै छोरा थिए।
अहिले एलेक्सिस ३९ वर्षकी भइन् भने उनका श्रीमान डेभिड ४४ वर्ष पुगे। हालै पछिल्लोपटक एलेक्सिस् सुत्केरी भएपछि उनीहरु छोरीका बाआमा पनि बन्न सफल भए।
छोरी जन्मिएपछि खुसी हुँदै एलेक्सिसले डेलीमेलसँग भनेकी छन्, ‘यो पनि छोरा नै होला भन्ने सोचेको थिए। तर छोरी पो रहिछे। म अचम्ममा परें। तैपनि धेरै खुसी पनि लाग्यो।’
परिवारको नयाँ सदस्यको नाम उनीहरुले क्यामरुन राखिदिएका छन्। अहिले क्यामरुन २ वर्षदेखि र १७ वर्ष उमेरका १० जना दाजुसँग बस्छिन्।
उनीहरुका बुवा डेभिड ट्रेन चालक हुन्। आफ्ना छोराहरुले पनि क्यामरुनलाई मन पराएकोमा डेभिड दंग छन्। भन्छन्, ‘केटाहरु एकदम खुसी छन्। बहिनीलाई खुवाउनदेखि खेलाउनसम्म पछि पर्दैनन्।’
क्यामरुन अगस्ट २७ मा जन्मिएकी थिइन्।
अब हामी साँच्चै बच्चा जन्माउँदैनौ हाँस्दै एलेक्सिस्ले भनिन्, ‘अब भयो। यो चाहि अन्तिम भनेको पनि धेरै पटक भयो। तर अब भने पुग्यो।’
‘हामीलाई कतिपयले कति धेरै छोरा पाएको भनी कुरा पनि काट्छन्। मानिसले के भन्छन् भनेर हामी चासो पनि राख्दैनौ’, डेभिडले भने।
१० औं सन्तानसम्म गर्भमा रहेको बच्चाका लिंग पहिचान नगरेका बताउने एलेक्सिस्ले यो पटकको गर्भमा भने लिंग पहिचान गरेको खुलाइन्। एक प्राइभेट क्लिनिकमा उनीहरुले लिंग पहिचानका लागि स्क्यान गरेका रहेछन्।
भनिन्, ‘कस्तो कौतुहलता थियो नि। छोरी हुने भनिए पनि ५०/५० को चान्स थियो। तर छोरी नै भयो।’
११ जना सन्तानलाई खुवाउन पियाउन भने निकै खर्च हुने डेभिड दम्पती बताउँछन्। उनीहरुको जुठो भाँडा पनि एलेक्सिस आफैले माँझ्ने गर्छिन्। ११ जना बच्चाहरु खेल्दा छिनमै फोहोर हुने र सफा गर्न हैरानी खेप्नुपर्ने पनि उनी बताउँछिन्।
उनले भनिन्, ‘कहाँ सजिलो छ र यति धेरैलाई स्याहार्न। तर आफ्ना बच्चाहरुको सरसफाइमा ध्यान दिनैपर्‍यो। घर पति त सफाचट बनाउनुपर्‍यो। मलाई सफा गरिरहन मनपर्छ।’
उनीहरुलाई घुमाउन पनि उत्तिकै मुस्किल छ। कामले गर्दा फुर्सद निकाल्न नसकेको उल्लेख गर्दै डेभिड भन्छन्, ‘उनीहरुलाई बाहिर घुमाउन लैजाउँ त भन्छु। तर समय मिलाउनै सकिरहेको छैन। एक वर्ष त यसै बित्यो।’
स्कुल ड्रेस, घरमा लगाउने कपडामा पनि प्रशस्तै खर्च हुन्छ उनीहरुका लागि। ‘खेलौना पनि त किन्नैपर्‍यो, गाह्रो छ’ एलेक्सिस् भन्छिन्, ‘कहिलेकही त डेभिड र म एकले अर्कालाई हेर्छौँ अनि के गर्‍यौ हामीले यस्तो पनि भन्छौँ। तर हामीले चाहेर पनि अब सानो परिवारमा फर्कन त सक्दैनौँ नि।’
लगातार छोरा पुरुषकै कारण हो त?
एकै व्यक्तिबाट यति धेरै छोरा कसरी जन्मिए-यसमा के बुवाको शुक्रकीटको दोष हो त? यसबारे डेलीमेलले प्रोफेसर सिमोन फिसेलको भनाई राखेको छ।
उनले भनेका छन्, ‘शुक्रकीट एक्स क्रोमोजोम भए छोरी जन्मिन्छ भने वाई क्रोमोजोम भए छोरा। यसअघि ६ जना छोरा वा ६ जना छोरी शुक्रकीटकै कारण हुनसक्ने भनिएको थियो। साँचो कुरा त यो हो कि सत्य कसैलाई थाहा छैन। ब्रेट परिवारको ममला असामान्य रहेकोले यस विषयमा पक्का कुरा गर्न सकिदैन।’